18 qof ayaa ku dhimatay Duqayn ka dhacday Baladul Amiin oo ay Alshabaab ku soo bandhigayeen Gaari AMISOM ka gubtay. – Hornafrik Media Network
Deegaanka Baladul Amiin oo ay Kooxda Alshabaab ku soo bandhigayeen Gaari ay halkaasi shalay uga gubeen Ciidamadda Amisom ayaa la duqeeyay. waxaana Wararka aan ka helayno goobtaasi ay sheegayaan in illaa iyo 2 Gantaal lagu dhuftay.
Shacab ay soo qasbeen ayeey Alshabaab isugu keeneen Goobta si ay u daawadaan Gaariga AMISOM laga gubay. waxaana halkaasi ku dhintay 18 Qof oo isugu jiray Rayid iyo Maleeshiyaadkii soo qasbay ee Alshabaab.
Shalay ayeey Deegaanka Baladul Amiin ku gubeen Alshabaab Gaari ka mid ahaa Kolonyo AMISOM ah oo ka qayb qaadanayay Hawlgal Huwan ah oo ay iyaga iyo Ciidamada Dawladda Somalia ka samaynayeen Gobalka Shabeeladda Hoose.
Sawirada gaarigan oo dhamaantiis gubtay ayaa lagu faafiyay baraha Internet-ta ee taageera Al-Shabaab, waxaana la sheegay in gaariga uu qabsaday miino dhulka la geliyay.
Al-Shabaab ayaa sheegay inay si adag isaga difaaceen weerar ay ku soo qaadeen Ciidamada dowladda, iyo AMISOM oo taageero ka helayay Ciidamo Mareykan ah.
Ciidamada huwanta ayaa shalay subax weerar kedis ku qaaday deegaanada Al-Shabaab ka maamulaan Gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoo tuulooyin ay qabsadeen dib uga soo baxay.
Xaalada Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kacsan, iyadoo laga soo sheegayaa in dhaq dhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan.